Nin hal kalluun ah ku iibsaday ku dhawaad 2 milyan oo doolar - BBC News Somali
Nin hal kalluun ah ku iibsaday ku dhawaad 2 milyan oo doolar
7 Jannaayo 2020
Image caption Kiyoshi Kimura iyo kalluunka uu iibsaday
Warbaahinta Dowladda Japan ayaa kusoo warrantay in Kiyoshi Kimura oo isugu yeera "boqorka kalluunka" uu maqaaxiyo badan ku leeyahay dalkaas, kalluunka uu iibsaday miisaankiisuna uu dhan yahay 276 kiilo.
"Haa, kalluunka waa qaali, waxaana doonayaa in macaamiisheena ay sanadkan cunaan kalluun dhadhan leh," ayuu Kimura u sheegay wakaaladda wararka ee AFP.
Kalluunkan oo afka qalaad lagu yiraahdo Bluefin ayaa ahaa kan ugu weyn ee halkaas lo soo iib geeyay, waxaana hey'ad inta badan wax ka qorta noolasha xayawaanaadka oo lagu magacaabo World Wildlife Fund ay sheegtay in uu kalluunkaas noolaan karo muddo dhan 40 sano.
Image caption Sannadkii 2013-kii ayuu isla ninkan 1 kalluun ku iibsaday qiimihii ugu badnaa
Kalluunkan weyn ee uu hadda iibsaday oo culeyskiisu uu yahay 278kg ayaa ah nooca loo yaqaanno bluefin tuna, waana mid halis ugu jira inuu ka dabar go'o dunida.
"Waxaan iibsaday Tuna fiican", ayuu ku yiri wakaaladda wararka ee AFP, ka dib markii uu soo idlaaday bandhigga suuqa.